प्रदीपको पर्खाईमा साम्राज्ञी ! – " कञ्चनजंगा News "
प्रदीपको पर्खाईमा साम्राज्ञी !
No Comments on प्रदीपको पर्खाईमा साम्राज्ञी !
लगातारको असफलताले अभिनेत्री साम्राज्ञीलाई झस्काएको छ । सोही कारण अहिलेकोसम्म उनी कुनै पनि नयाँ फिल्ममा साइन नगरी चुपचाप बसिरहेकी छन् । साम्राज्ञी अभिनित फिल्म ‘मारुनी’ ले राम्रै प्रतिक्रिया पाएपनि बक्स अफिसमा अपेक्षित कलेक्शन गर्न सकेन ।
त्यस अगाडि रिलिजमा आएका फिल्म ‘कायरा’ र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ ले त अझ भन्नुपर्दा राम्रो प्रतिक्रिया समेत पाएनन् । साम्राज्ञीले मारुनी साइन गरेको केही दिनपछि नै प्रदीप खड्काको अपोजिटमा हेमराज बीसीको निर्देशनमा बन्ने फिल्ममा साइन गरेकी थिइन्।
मारुनी सकाएलगत्तै साम्राज्ञी यस फिल्मको सुटिङ जोइन गर्ने योजनामा थिइन् । तर, प्रदीप खड्का ‘प्रेमगीत ३’ को सुटिङमा ब्यस्त भएपछि उनी कुरेको कु¥यै भइन् । तिहार लगत्तै सुरु भएको सन्तोष सेनको ‘प्रेमगीत–३’ को सुटिङ मनाङमा धुमधामका साथ भइरहेको छ ।
← थाहा पाउनुस यसरी भएको थियो भगवान रामको मृ’त्यु ! → मनोकामना पूरा गर्ने दक्षिणकाली मन्दिर यसरी भएको थियो स्थापना